ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းအား ဆယ်ယူရန် ထပ်မံကြိုးစားဦးမည်ဟု ဦးစံလင်းပြောကြား
ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများနှင့် သမိုင်းကြောင်းများ ရောထွေးနေသည့် ရေအောက်နစ်မြုတ် ပျောက်ဆုံးနေသည်ဆိုသော ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို လာမည့် ဝါခေါင်လ (သြဂုတ်လ) တွင် ကုန်းပေါ်သို့အရောက် ဆယ်ယူမည်ဟု ဦးစံလင်းက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထိုင်းခရီးစဉ်အတွင်း ထားဝယ်စီးပွားရေးဇုန်ကိစ္စ ဆွေးနွေးဖွယ်ရှိ
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကိစ္စများ ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့် ပူးတွဲ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
တောတောင်တွေပေါ်ကို ဖြတ်ကျော်တည်ဆောက်နေတဲ့ မဟာဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်က လုပ်သားတွေဟာ အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတွေ မပြည့်မစုံပေမယ့် သူတို့အလုပ်ကို သူတို့ ခုံမင်ပျော်မွေ့နေကြပါတယ် ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံများ- တေဇလှိုင် အမဲရောင် မိုးတိမ်အနိမ့်တွေ အုံ့ဆိုင်းနေတဲ့ ရခိုင်ရိုးမအတွင်း ပေ ၁၀၀ ခန့်နက်တဲ့ ချောက်တစ်ခုရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးအစွန်းမှာ လူ ၁၂ ဦး.
Nyan Hlaing Lynn နှင့် Frontier ရေးသားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေး တိုးတက်ရန် ပြုပြင်သင့်သည်များကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် အကြံပြု
လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အရှိန်အဟုန်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားပြီး ပွင့်လင်းစွာ ကုန်သွယ်နိုင်ရန် ဆက်လက်ကြိုးစားမှသာ မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှု အခန်းကဏ္ဍ တိုးတက်လာမယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် အဗ္ဗဒူလာရေ ဆက် က အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဘာဝသယံဇာတအပေါ် အခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးကို မှီခိုနေရာကနေ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အလားအလာကောင်းတွေရှိတဲ့ အခြားသောလုပ်ငန်းတွေကို.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံလေ့မရှိသည့်အပေါ် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ကာကွယ်ပြောကြား
နိုင်ငံတော် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ ပြုလုပ်လေ့မရှိဟုဆိုကာ ဂျာနယ်လစ်များက ဝေဖန်နေမှုများအပေါ် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးဖေမြင့်က ကာကွယ်ပြောကြားလိုက်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူ မစ္စယန်ဟီလီ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
၎င်း၏ ယခု ခရီးစဉ်သည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရလက်ထက်တွင် ပထမဆုံး လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်သည်။
ရုရှားနှင့် မြန်မာ စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လက်မှတ်ရေးထိုး
ရုရှားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကြား စစ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်ကို နှစ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများက သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြ
ရေမွှေးဆီ၊ ရှားပါးမှိုနဲ့ ငွေပုံကြီး
မြောက်ဖျားဒေသရှိ ဝေးလံခေါင်းပါးသော ပူတာအိုမြို့၌ ရေမွှေးနှင့် နံ့သာဆီတို့အတွက် တန်ဖိုးကြီး ကုန်ကြမ်းအမယ် တစ်ခုမှနေ၍ ကြီးမားသော အကျိုးအမြတ်များ ရရှိရန် သေချာသော်လည်း ယင်းကုန်ကြမ်းမှာ ထိုဒေသ၏ တစ်ခုတည်းသော တန်ဖိုးကြီး သဘာဝ သယံဇာတ မဟုတ်သေးချေ။
ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီဖြစ်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့
လူအင်အား မပြည့်စုံမှု၊ ပစ္စည်းကိရိယာ မလုံလောက်မှုနဲ့ ထောက်ပံ့ငွေ နည်းပါးမှုတွေက မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်နိုင်စေဖို့ အစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာ အတားအဆီး ဖြစ်နေပါတယ် ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံများ- သိမ့်မွန်စိုး (J) ကိုယ့်အိမ်ထဲ လူစိမ်းတယောက်ဝင်လာပြီး ရန်ရှာဖို့ ကြိုးစားတယ် ဆိုပါစို့။ အိမ်ရှင်က ရဲကိုဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားမယ်။ ခဏနေတော့ ရဲကားတစ်စီး.